महरा र महाराज - Jhilko
‘कहाँ राजा राम कहाँ गंगु तेली’ भन्ने उखान त प्रचलित नै छ । यसको सिधा अर्थ हो महाराजा रामको अगाडि गंगु तेलीको कही लाग्दैन भन्ने हो । यो उखानको चरितार्थ फेरीपनि भएको छ । एकै प्रकृतिको मुद्धामा महाराजलाई माफी र तेलीहरुलाइ फाँसी हुनु अनौठो विल्कुलै होइन ।
अहिले यस्तै दुइजना पात्रहरु यतिखेर चर्चाको शिखरमा छन् । ती एउटै नाम राशी भएका पात्रहरु हुन् कृष्णबहादुर महरा र कृष्णदास जी महाराज । दुबैको खास नाममा भने कुनै फरक छैन । एकजना पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा हुन् भने अर्को कृष्णबहादुर गिरी ।
यतिबेला दुवै एउटै किसिमको अभियोगमा कानूनी कठघरामा छन् । तर महाराज जी धरौटीमा रिहा भएका छन् भने महरा पुर्पक्षमा जेल बस्न बाध्य छन् । यतिमात्र होइन, महराले प्रहरी हिरासत पनि नियमानुसार गुज्रान गरे । महाराज जी ले भने प्रहरी हिरासतको साटो विराट नर्सिङ होमको सुविधासम्पन्न कक्षमा विताए । महरा अहिले पनि डिल्लीबजारको सदरखोरको चिसो छिँडीमा मुद्धाको गणित वकिलहरुसँग केलाएर बसिरहेका छन् । महाराज जीले बलत्कार गरेकै हो भनिकन उनकै पूर्व भक्तिनीले बारम्बार जिकिर गर्दै आएकी छिन । महाराज भक्तिनीहरुको भक्ष गर्ने प्रमुख पात्र रहेको जिकिर महिलावादीहरुले जुलुस ¥याली निकालेर गरिनै रहेका छन् ।
यता महराको हकमा भने उनकी पूर्व अनुयायी रोशनी शाहीले बारम्बार महरा निर्दोष भएको अखण्ड निवेदन गर्दै आएकी छिन । पहिले महराले तलमाथि गरेको सार्वजनिक गरेपनि त्यो भुलचुकमा भएको जिकिर गरेको पनि लामै लिखत छ । अदालत मै गएर शाहीले अखण्ड निवेदन गर्दा पनि उच्च अदालतलेसमेत उनको निवेदनलाई दरपीठ गरिदिएको छ ।
यहिँनेर आएर महरा र महारजमा फरक परेको हो । महरा विचरा गंगु भए । कृष्णदास राजाहरुको पनि राजा महाराजा श्रीराम भएकाले यस्तो हुन गएको हो । सतीले सरापेकै भरमा थुरथुर काँप्ने नेपालमा महाराजहरुको अगाडि स्वाभावैले डराएका हुनन । कतै सिद्धबाबा तपस्वी कृष्णदास महाराजले भष्म गरिदिने धम्कीकै डरले उनले छुटकारा पाएका पनि हुनसक्छन् । यसर्थ महाराजका कस्तै अपराध पनि कानूनले, न्यायले नदेख्नु अनौठो होइन । महाराजहरुका लागि सात खत माफी मिनाहा हुने यो देशमा महराले बली चढ्नु नै थियो । महाराजलाई माफी र महरालाई अदालतले पुनः सास्ती दियो भनेपनि अनौठो नमाने हुन्छ । कि कसो ? समयबद्ध साप्ताहिकबाट
२५ वर्षदेखि पात खाएर बाँचेका मान्छे !
इरानमा विमान दुर्घटना हुँदा १७० जनाको मृत्यु
महाशिवरात्रिमा गुठी संस्थानको यस्तो तयारी
गुठी संस्थानले महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने साधुसन्तका लागि...
चेन्नई पुगेका किशोरको उद्धार
रोजगारीका लागि भारतको चेन्नई जाँदै गरेका महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सर्लाही जिल्लाका...
हिटलरको ज्यादती : मानिसको छालाबाट बनाउँथे फोटो एल्बम
मानिसको छालाबाट बनेको उक्त फोटो एल्बम अस्चविट्ज मेमोरियल म्युजियममा राखिएको छ ।...